Yakazara Hondo: WARHAMMER III: yakanonoka kusvika 2022 | Linux Vakapindwa muropa
Yakazara Hondo: WARHAMMER III nderimwe remazita anotarisirwa kwazvo pane akasiyana mapuratifomu. Nekudaro, kukumbira kwakawanda kuri kuitwa, seCreative Assembly yakazivisa kuti zita racho richanonoka. Panzvimbo pekuisunungura kusvika kumagumo kwa2021, ichazosendekwa kutanga kwa2022. Panguva iyoyo ichasvika kune akati wandei masisitimu, uye Feral Interactive yakatosimbisa kuti ichaenda nayo kuLinux.
Chiziviso chakatumirwa pane yepamutemo Twitter account uye pane Steam kuverenga: «Iine angangoita makore gumi ekuvandudza paHondo Yakazara: WARHAMMER trilogy kumashure kwedu, zvinonzwa surreal kuona chitsauko chayo chepedyo choda kusunungurwa. Ndichiri kuyedza kumhanyira kumutsetse wekupedzisira kana zvasvika pakuonekwa, takaita sarudzo yekuipa imwe nguva nekufambisa kuburitswa kwe2021 yeHondo Yese: WARHAMMER III. kutanga 2022.«
Naizvozvo, vese mafeni vachaona kuvhurwa kuchinonoka, iyo yekumirira ichave yakati rebei kupfuura zvaitarisirwa, asi ichauya. Uye zvakare, ye chiteshi cheLinux zvingangodaro zvichizowedzera kunonoka. Zuva idzva rekuburitsa harisi chairo, asi chikonzero chekunonoka chinoratidzika kunge ndechekuti ivo vakagadzira Hondo Yese: WARHAMMER III vari kushanda kuti iite yakasimba uye ine zvirimo zvirinani, pasina kumhanyisa kupedzisa trilogy nenzira yakaipa , uye zvinogumbura vese vateveri vakavimbika.
Kana iwe uchida kuita kuti kumirira kupfupike, uye usati wamboedza ivo izvozvi, unogona kunakirwa Yese Hondo: WARHAMMER mune ayo apfuura vhezheni kubva zvino zvichienda mberi. Iwe zvakare une mukana wekuita iyo pre-kutenga kubva kuHondo Yese: WARHAMMER III pane iyo Valve Chitoro,Steam ikozvino. Mutengo wazvino ndeye € 59,99, mutengo unodhura kwazvo weiyo vhidhiyo yemutambo zita, asi iyo inopindura kunaka uye kubudirira kweiyi franchise ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Yakazara Hondo: WARHAMMER III: yakanonoka kusvika 2022
Cathedral 3-D: iyo FPS inosvika iyo GNU / Linux distros